Abakhiqizi bokukhanya bokuhlinza & abahlinzeki - China Ukukhanya Kwamalambu Okukhanya
I-LEDB200 I-LED Wall Wall Type Light Mounted Medical Examination Light yemitholampilo Yezilwane
Uchungechunge lokukhanya kwe-LED200 lutholakala ngezindlela ezintathu zokufaka, ilambu lokuhlolwa kweselula, ukukhanya kwelambu lokuhlola nokhanya lokuhlola olufakwe odongeni.
Uhlobo lwe-LEDB260 LED Operating Lamp Wall Type for Hospital
Uchungechunge lwesibani sokuhlolwa kwe-LED260 luyatholakala ngezindlela ezintathu zokufaka, ukufakwa kweselula, uphahla nodonga.
LEDB500 Wall-agibele amahhashi LED Ukusebenza Lamp nge CE Izitifiketi
Uchungechunge lwesibani sokusebenza kwe-LED500 lutholakala ngezindlela ezintathu, ukufakwa kwesilingi, iselula nodonga olufakiwe.
Uhlobo lwe-LEDB620 Wall Type Lighting Lighting ye-LED kusuka kuMenzi
Umbani ohlinzekwayo we-LED620 utholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-LEDB620 ibhekisa odongeni ukukhanyisa umbani wokuhlinzwa.
I-LEDB730 Wall Mounting LED OT Lamp nge-Armiculated Arm
Isibani se-LED730 OT sitholakala ngezindlela ezintathu, ukufakwa kwesilingi, iselula nodonga.
I-LEDB730 isho isibani se-OT esikhishwe odongeni.
I-LEDB740 Wall Mount LED Operating Theatre Light ngefektri Inani
Ukukhanya kwe-LED740 Operater yaseshashalazini kutholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-DB500 Lamp Wall Halogen Lamp Yokuhlinza ene-Manual Focus
Isibani sokuhlinza se-D500 Halogen sitholakala ngezindlela ezintathu, kufakwe ophahleni, kufakwe iselula nodonga.
I-DB500 isho isibani sokuhlinza esikhanyiswe ngodonga se-halogen.
I-LEDL100 LED Mobile Flexible Medical Examination Light ye-Gynecology
I-LEDL110, leli gama eliyimodeli libhekisela ekukhanyeni kokuhlolwa kwezokwelapha okuhambayo ngengalo eguqukayo.
Lokhu kukhanya okuhlola okuguquguqukayo kungumthombo osizayo womthombo wokukhanyisa ovame ukusetshenziswa ngabasebenzi bezokwelapha ekuhloleni, ekuxilongweni, ekwelashweni nasekunakekelweni kweziguli.
I-LEDL100S LED Gooseneck Mobile Medical Examination Lamp ene-Adjustable Focus
I-LEDL100S, leli gama eliyimodeli libhekisa kusibani sokuhlolwa kweselula se-LED ngengalo ye-gooseneck eguquguqukayo nokugxila.
I-LEDL110 LED Gooseneck Portable Medical Exam Light on Amasondo
I-LEDL110 ibhekisela ekukhanyeni kokuhlolwa okuphathekayo kwe-LED emasondweni.
Lokhu kukhanya kokuhlolwa okuphathekayo kuyisetshenziswa somthombo wokukhanyisa osizayo esivame ukusetshenziswa ngabasebenzi bezokwelapha ekuhloleni, ekuxilongweni, ekwelashweni nasekunakekelweni kweziguli.
Ukukhanya kwe-LEDL200 LED Mobile Medical Examination nge-Optional Battery Back Up System
I-LEDL260 CE Uhlobo Lokuma Oluvunyelwe I-LED Yokuhlola Ukukhanya Komtholampilo Wezilwane
Ukukhanya kwe-LED260 kutholakala ngezindlela ezintathu zokufaka, ukufakwa kweselula, uphahla nodonga.
I-LEDL260, leli gama eliyimodeli libhekisela ekukhanyeni kokuhlolwa kohlobo lokuma.